Ahoana ny fametrahana ny firmware izay tadiavinay ao amin'ny mpamaky Kobo | Ireo mpamaky rehetra
Ahoana ny fametrahana ny firmware izay tadiavinay ao amin'ny mpamaky Kobo
Mpamaky Kobo marobe
Mihabetsaka ny kinova firmware sy tsy dia matetika no miasa tsara amin'ny eReader antsika. Raha ny momba an'i Kobo dia tsy ela akory izay dia nanana olana tamin'ny fanavaozana izay tsy mandeha tsara amin'ny mpamaky ahy aho ka nanapa-kevitra ny hiverina amin'ny kinova taloha kokoa hanamboarana azy.
Ny zavatra dia, Kobo dia manana rafitra iray hahatonga azy io ho tsotra Tsara ny manonona sy miresaka momba azy io, fomba iray izay tsy manimba ny rindrambaiko eReader na ny eReader mihitsy ary tsy mila manao famerenana.
1 Inona no ilaiko apetraka amin'ny firmware tadiaviko?
2 Ahoana ny fomba fametrahana ny firmware tadiaviko?
Inona no ilaiko apetraka amin'ny firmware tadiaviko?
Mba hanaovana izany dia mila isika fonosana zip misy firmware izay tiantsika hapetraka. Amin'ny ity tranonkala ity Hahita ny lisitry ny tranokala Kobo rehetra ianao. Tokony hanana antoka ny atiny rehetra isika satria hamafana ny angon-drakitra rehetra ananantsika ny rafitra. Hila ihany koa isika solosaina handefasana ireo rakitra ao amin'ny mpamaky ary manana ny mpamaky bateria voafafa tanteraka. Tena zava-dehibe ity farany satria raha tsy misy azy io dia mety ho simba tanteraka ny eReader antsika.
Ahoana ny fomba fametrahana ny firmware tadiaviko?
Raha vantany vao fenoina ireo fepetra voalaza etsy ambony dia ampifandraisinay amin'ny solosaina ny eReader anay. Raha vao mifandray dia esorinay ny rakitra zip miaraka amin'ny firmware ary izay ao anatiny dia alainay ao anaty folder .kobo an'ny eReader anay. Vantany vao vita kopia izahay, dia esorinay ny eReader amin'ny solosainay ary dia hanomboka hametraka ny firmware izay napetrantsika. Indraindray ny mpiorina dia tsy mitsambikina ary tsy maintsy averintsika indray ilay eReader mba hahafantarany ny fisie napetraka.
Raha vantany vao tafapetraka ny firmware vaovao dia tsy maintsy ataontsika antoka fa manana ny rafitra sembana fanavaozana mandeha ho azy, satria raha toa ka mampihetsika azy io, aorian'ny fampifanarahana ny eReader dia hamerina hametraka ny kinova farany na ny kinova misy olana.
Araka ny nolazaiko taminao, mora ny rafitra ary tsy manana fahasarotana. Izy io koa dia rafitra iray ahafahantsika miverina amin'ny kinova izay iasan'ny Kobo eReader tena tsara. Tsy manimba ny eReader na rindrambaiko. Manoro hevitra anao aho alohan'ny hanaovana azy, vakianao tsara izany satria ny lesoka dia mety hidika fa amin'ny fotoana maharitra dia tsy misy eReader isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » kobo » Ahoana ny fametrahana ny firmware izay tadiavinay ao amin'ny mpamaky Kobo
Ho tonga lafatra i Kobo raha toa ka manana fandaminana fampirimana
Kobo Touch 2.0 misy 9 septambra
Ebrolis na ny fomba hidirana amin'ny boky maimaimpoana na tena mora isan'andro